State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo | KWIT
Oromo News 01.11.21
Iowa warri ammatii puplic health akka himanitti haguugi fula alaatti godhachun akka qabamuufi yoo daqiiqa 15 ol walbira turaniile.
Garuu seera baastonni repaplikaana walgahii har’a Capital keessati walitti qabamanitti haguugi fuula godhachuu didan. Warii seeraa egaan 150 ta’an haguugi fuula male Statehouse walitti qabaman.
Iowa keessatti namni haarawa Covid-19 qabaman nama 511 yoo ta’an namni 11 ammoo duanii jiran. March irraa akka dhukubni jalqabame booda namni corona virus qabaman 300,000 yoo ta’an nmani duemmoo 4100 dha.
Woodburry County keessati, seati 24 keessati namni haarawa qabame 27 dha.
Districtiin mana barumsa Sioux City barattoota January 4 fi 5 hafan wayta qoratu namni 28 corona virus akka qabaman himan.
Aanan mana barumsa torbaan lamaaf barums aonline dhaaf oofa jira, barattooni qixxeen isaani torbaan lama kan deeman yoo tau barattooni hafanis guyyaa lamaan deeman. Board mana barumsa Sioux City guyyaa har’a walagahii galgala kana kan qabaniidha karoora barumsaa fi waggaa hafeef kan murteesaniidha.
By Fatiya Adam • Jan 8, 2021
Hawaasni mana barumsaa Iowa gabaasa corona virus torbaan kana irrati hojattoota keessa namni tokko kan qabamee fi barattooni homa akka hin qabamin himan.
Namni 200 ammati adda baafamani taa’urra kan bahaniidha. Kunis December dhuma irrati 500 gad kan bu’eedha.
Barumsaf barattoni wiyxata kan dhaqan yoo tau barumsi online torbaan lamaaf kan hafeedha.
Kunis barumsaaf guyya lama qofa barumsaaf torbaan keessatti kan deemaniidha. Haala barumsaa irrati boordi wiyxta dhufuu walgahanii akka irrati mariatan himan.